Unicity ၏ နှစ်စဉ် ကမ္ဘာအနှံ့အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့် ထုတ်ကုန် စတင်မိတ်ဆက်ပွဲအတွက် နိုင်ငံပေါင်း ၅၀ ကျော်မှဖြန့်ဖြူးရောင်းချသူများနှင့် ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
UNICITY သိပ္ပံပညာရှင်များထံမှ နားထောင်လိုက်ပါ။
ထုတ်ကုန်အသစ်များကို ပထမဦးဆုံး လက်တွေ့စမ်းသပ်ခံစားသူ ဖြစ်ပါ။
Unicity GLIC သည် မိမိတို့၏ အိပ်မက်များအပေါ် အကောင်အထည် ဖော်နိုင်သူများနှင့် အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့သူများကို တွေ့ဆုံပြီး လေ့လာသင်ယူနိုင်ရန် ရှားပါးသော အခွင့်အရေးဖြစ်သည်။
၂၀၁၉ နိုင်ငံတကာဦးဆောင်မှုနှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုအခမ်းအနားအတွက် စုရုံးမှုပြုလုပ်ရာတွင် ထောင်ပေါင်းချီသော Unicity ခေါင်းဆောင် များနှင့် ပူးပေါင်းဆင်နွဲလိုက်ပါ။ ဇိမ်ကျမှု၊ ပျော်ရွှင်မှုများနှင့် အောင်မြင်မှုများဖြင့် ပြည့်နှက်နေသော ရွေးချယ်မှု အတွေ့ အကြုံတစ်ခု ဖြစ်သည်။
ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာ ကိုရီးယားနိုင်ငံသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်ဘ၀ကိုရှာဖွေနေသော ကုန်သည်များ၊ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များ နှင့် ခရီးသွားများကို ဆွဲဆောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ စိတ်ဓာတ်ဝိညာဉ်ကို တွေ့ကြုံခံစားနိုင်မည့် အခွင့်အရေးကို လက်မလွှတ်လိုက်ပါနှင့်။
တွင် သင့်အစားအစာအတွက် ကြိုတင်စီမံရွေးချယ်ထားလိုက်ပါ။ အစားအစာ
ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏အံ့သြဖွယ်မြင်ကွင်းများကို လှည့်ပတ်လိုက်ပါ။ visitkorea.or.kr တွင် အကြံဥာဏ်ရယူလိုက်ပါ။
GLIC ၂၀၁၉ ပွဲတက်ရောက်ရန်နှင့် သင့်အသုံးစရိတ် အံကိုက်ဖြစ်စေမည့် ဟိုတယ်ကိုစောစောကြိုတင်စာရင်း ပေးထားပါ။
အခမ်းအနားကျင်းပမည့်နေရာနှင့် အနီးတွင် ဟိုတယ်များစွာ ရှိပါသည်။
အခမ်းအနားကျင်းပမည့်နေရာနှင့် အနီးတွင် မြအောက်ရထား ရှိပါသည်။
ကိုရီးယားနိုင်ငံသို့ သင်၏ခရီးသွား လည်ပတ်မှုအတွက် သင့်လျော်သော သတင်းအချက်အလက်များ ရှိပါသည်။
၂၀၁၉ နိုင်ငံတကာဦးဆောင်မှု နှင့် တီထွင်ဆန်းသစ်မှု အခမ်း အနား
12 ဇှနျလ 2019 အခြိနျအထိ
လက်မှတ် ကြိုတင် မှာယူရန်။
ဒီနေရာကနေ ကြိုတင်မှာယူပြီး အဲဒီ GLIC Special Packages ကို ကိုယ့်ရဲ့ရုံးကနေ ယူလို့ရပါလား?
ဖြေ - မရပါဘူး။ GLIC Special Packages ကို Global Leadership and Innovation Conference 2019 ကနေပဲ ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
GLIC Special Packages ကို ဘယ်အချိန်ရမှာလဲ။ နောက်ပြီး ဘယ်လိုရယူရမှာလဲ?
ဖြေ - ပြပွဲခန်းမ(၂) မှာရှိတဲ့ အွန်လိုင်းအော်ဒါကောက်ယူတဲ့ကောင်တာမှာ ၂၀၁၉၊ ဇွန်လ ၁၄ရက်နေ့၊ နေ့လည် ၁၂း၀၀ နာရီကနေ ည ၁၀း၀၀ နာရီအထိ၊ ၂၀၁၉၊ ဇွန်လ ၁၅ရက်နေ့၊ နံနက် ၉နာရီကနေ ည ၇း၃၀နာရီအထိ မှာယူနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုံးဝန်ထမ်းတွေကနေ Barcode ပါဝင်တဲ့ သင့်ရဲ့အော်ဒါအတည်ဖြစ်ကြောင်းကို Screenshot နဲ့ ပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Global Leadership and Innovation Conference 2019 မှာ GLIC Special Packages မှာယူနိုင်လား?
ဖြေ - မရပါဘူး။ GLIC Special Packages က ကြိုတင်မှာယူမှုတစ်ခုတည်းပဲရရှိနိုင်ပါတယ်။
GLIC Special Packages ၀ယ်ယူရမှာ ဘယ်လိုငွေပေးချေမှုလုပ်ရမှာပါလဲ?
ဖြေ - MasterCard and Visa credit/debit card ကနေပဲ ငွေပေးချေရမှာပါ။
ဖြေ - ငွေလဲလှယ်နှုန်းအတွက်ကတော့ လက်ရှိဘဏ်က သတ်မှတ်ထားတဲ့ နှုန်းနဲ့ပါ။
တကယ်လို့ ကိုယ့်မှာ အော်ဒါအတည်ဖြစ်ကြောင်း Screenshot မရှိခဲ့ရင် ဘာများလုပ်သင့်ပါလဲ?
ဖြေ - သင့်ရဲ့ BA နံပါတ်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ရုံးဝန်ထမ်းတွေဆီမှာ စီစဉ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။
GLIC Special Packages ကို ဘယ်သူတွေဝယ်လို့ရလဲ?
ဖြေ - GLIC Tickets ရှိသူသာလျှင် ၀ယ်ယူ ၊ ရယူ ပေးနိုင်ပါတယ်။
GLIC Special Packages ကို ကိုယ်စားရယူနိုင်လား?
ဖြေ - ရယူနိုင်ပါတယ်။ အော်ဒါနံပါတ်နဲ့ အတည်ဖြစ်ကြောင်းနံပါတ် ဒါမှမဟုတ် သင့်ကိုယ်စားထုတ်ယူသူရဲ့နံပါတ် နဲ့အတူ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေဆီမှာ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။
ဖြေ - ကြိုတင်မှာယူမှုတွေကို ပယ်ဖျက်လို့မရ၊ ငွေပြန်မအမ်းသလို ပစ္စည်းလဲလှယ်တာမျိုးလည်းမရပါဘူး။
ကြိုတင်မှာယူတဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်မှာ email လိပ်စာ မှားသွားရင် ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်ပါသလဲ?
ဖြေ - email လိပ်စာမှားသွားခဲ့ရင်တော့ သင့်ရဲ့အော်ဒါနံပါတ်နဲ့ အတည်ဖြစ်ကြောင်းနံပါတ်တွေ ရရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။
GLIC Special Packages မှာ ဘာတွေပါလဲ?
ဖြေ - GLIC Special Packages မှာ2boxes of LC Base,2boxes of Unimate Fuel, 1 Blender bottle and 1 Eco bag ပါပါတယ်။ အခြေနေအရ ပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။
GLIC Special Packages ကို ကြိုတင်မှာယူရင် ဘာအကျိုးကျေးဇူးတွေ ရနိုင်ပါသလဲ?
ဖြေ - ဒီလိုကြိုတင်မှာယူခြင်းဖြင့် တန်းစီဝယ်ယူလို့ အချိန်ကုန်မှုမရှိစေသလို လက်ဆောင်တွေနဲ့ PV အပိုတွေ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လမှာ ကြိုတင်မှာယူမှု PV စာရင်းတင်ရမှပါလဲ?
ဖြေ - ၀ယ်ယူတဲ့လမှာပဲ ကြိုတင်မှာယူမှု PV ကို စာရင်းတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကြိုတင်မှာယူမှုတွေအတွက် ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းက ဘယ်လိုပါလဲ?
ဖြေ - လက်ရှိတန်ဖိုး(PV)က အော်ဒါမှာတဲ့လမှာ ရှိနေတဲ့နှုန်းထားနဲ့ တွက်ပေးမှာဖြစ်ပြီး ၀န်ဆောင်ခကလည်း CV နှုန်း ကိုရီးယားဝမ် ၁၀၀၀ နဲ့ KR (အာရှ)ရဲ့ အကျိုးခံစားကြေးငွေအပေါ် တွက်ချက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ပွဲနေ့ရောက်မှ တည်နေရာတွင် လက်မှတ၀် ယ်ယူရန် ဖြစ်နိုင်ပါသလား။
မရနိုင်ပါ၊ ပွဲနေ့မတိုင်မီ Unicity ရုံး (သို့) GLIC ၀က်ဆိုဒ်တွင် လက်မှတ်က၀ို ယ်ယူရပါမည်။ အင်တာနက်မှ မဟုတ်သော ၀ယ်ယူမှုမျိုးအတွက် သင့်နိုင်ငံရှိ Unicity ရုံးကိုဆက်သွယ်ပါ။
လက်မှတ်ဝယ်ယူရာတွင် အသက် အကန့်အသတ် ရှိပါသလား။
မည်သူမဆို လက်မှတ၀် ယ်ယူနိုင်ပါသည်။ သို့သော်၊ ကလေးငယ် များကို VIP အထူးဧည့်နေရာ၊ မည်သည့်စင်ပေါ်နေရာမဆို၊ ဆွေးနွေးခန်းမများ၊ Black Tie Party ပွဲသို့ မရောက်ရှိစေရန် လုံးဝတားမြစ်ထားကြောင်း သတိပြုပါ။ ပွဲသို့ရောက်ရှိလာသော မည်သည့် ကလေးငယ်မဆို မိဘများက ထိန်းကြောင်းရမည်ဖြစ်သည်။ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် နည်းပညာများ၊ မီးလျှံများနှင့် လူအများကြောင့် အသံကျယ်လောင်ခြင်းရှိနိုင်သည်ကို သတိပြုပါ။
မရှိပါ၊ တက်ရောက်သူအားလုံး (အရွယ်ရောက်သူ နှင့် ကလေးငယ)် တူညီသောဈေးနှုန်းဖြင့်လက်မှတ၀် ယ်ယူရပါမည်။
လက်မှတ်မ၀ယ်ခင်တွင် ထိုင်ခုံနေရာရွေးချယ် နိုင်ပါသလား။
ထိုင်ခုံနေရာများကို နိုင်ငံအလိုက် သတ်မှတ်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ တည်နေရာရှိမိမိထိုင်ခုံနေရာကို ဦးရာလူစနစ်ဖြင့် သေချာစစ်ယူနိုင်ပါသည်။
အွန်လိုင်းမှ လက်မှတ်ဝယ်ယူရာတွင် ထိုင်ခုံနေရာဇုံ မှားပြီးရွေးချယ်မိပါက မည်ကဲ့သို့ဖြစ်နိုင်မည်နည်း။
ကိုယ်ရွေးချယ်ထားသည့်နိုင်ငံအတွင်း ထိုင်ခုံနေရာ ရမည်ဖြစ်သည်။ ဤ ကဲ့သို့သောအဖြစ်အပျက်မျိုးဖြစ် ပေါ်လာပါက မိမိနိုင်ငံရှိ Unicity ရုံးကို ဆက်သွယ်ပါ။
ကျွန်ုပ်သည် ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံရုံးမှလက်မှတ်ကိုမှာယူပါက မည်ကဲ့သို့ဖြစ် နိုင်မည်နည်း။
အလိုအလျောက် ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းထိုင်ခုံ နေရာဇုံတွင် ထိုင်ရပါလိမ့်မည်။ ပွဲစဉ်အတွင်းမိမိထိုင်လိုသောနေရာအလိုက် နိုင်ငံရှိ Unicity ရုံးမှ လက်မှတ်ဝယ်ယူရန် သေချာဖို့လိုပါသည်။
အွန်လိုင်းမှ လက်မှတ်ဝယ်ယူပြီး အတည်ပြုအီးမေးလ် (သို့) SMS စာစောင် မရောက်လာပါက မည်သူ့ကိုဆက်သွယ်ရမည်နည်း။
ကျေးဇူးပြုပြီး သင့်နိုင်ငံရှိ Unicity ရုံးကိုဆက်သွယ်ပါ။
ရေအတွက်များစွာဖြင့် တစ်ခါတည်း လက်မှတ် ၀ယ်နိုင်ပါသလား။
ရနိုင်ပါသည်။ ခေါင်းဆောင်များက လက်မှတ်အရေအတွက် များစွာကို တစ်ခါတည်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
မိမိလက်မှတ်နှင့် အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများ ကိုမည်သည့်အချိန်တွင်ရနိုင်မည်နည်း
ဈေးကွက်တစ်ခုချင်းစီတွင် လက်မှတ်များနှင့် အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများကို ဖြန့်ဝေရန် သီးခြားအစီအစဉ်ရှိကြပါသည်။ အွန်လိုင်းနှင့် အင်တာနက်အသုံးမပြုပဲ ၀ယ်ယူသူများ နှစ်မျိုးစလုံးသည် GLIC ပစ္စည်းများ မည့်သည့်အချိန်နှင့်မည်သည့် နေရာတွင်ရရှိနိုင်မည်ကို မိမိနိုင်ငံရှိ Unicity ရုံးနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ရမည်။
လက်မှတ်များကိုပြန်မအမ်းပါ။ သို့သော် အခြားစီးပွားဖက်များ (သို့) ဖြန့်ဝေသူများဆီသို့လွှဲပြောင်းပေးအပ်နိုင်ပါသည်။
ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအသစ်ကို တည်နေရာတွင် ၀ယ်ယူနိုင်ပါသလား။
ရပါသည်။ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများကို စတင်မိတ်ဆက် ဖြန့်ဖြူးသည့်ပွဲပြီးသည်နှင့် ကောင်တာခုံတွင် ချက်ချင်းရရှိနိုင်ပါသည်။
ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအတွက် ငွေပေးချေရန် အခြား ရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းများရှိပါသလား။
ငွေသားလက်ခံပါသည် (ပြည်တွင်းငွေကြေးဖြစ်သည့် KRW ကိုရီးယားဝမ်ကိုသာ လက်ခံမည်ဖြစ်ကြောင်းသတိပြုပါ)။ အကြွေး ၀ယ်ကဒ်ပြားဖြင့် ငွေးပေးချေနိုင်သော်လည်း ငွေသားဖြင့်ပေးချေခြင်းသည် လုပ်ငန်းပိုမိုမြန်ဆန်မည်ဖြစ်သည်။
မည်ကဲ့သို့သော ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအသစ်ကို ၀ယ်ယူနိုင်ပါသလဲ။
၀မ်းနည်းပါတယ်၊ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအသစ်အကြောင်း သတင်းအချက်အလက်သည် လျို့ဝှက်ထားရှိမှုဖြစ်ပြီး စတင်မိတ်ဆက် ဖြန့်ဖြူးသည့်အခါမှ ထုတ်ဖော်ပြသသွားမည်ဖြစ်သည်။
ပွဲပြီးသည့်အခါ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအသစ်ကို online မှ (သို့) နိုင်ငံတစ်ခုစီရှိ ရုံးချုပ်မှတစ်ဆင့် ၀ယ်ယူနိုင်ပါသလား။
ပွဲစဉ်အချိန်ဇယားသည် နောင်အချိန်တွင် ကြေညာသွားမည်ဖြစ် သည်။ လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေသော သတင်းအချက်အလက်များ နှင့် ကြေညာမှုများကို ကျွန်ုပ်တို့၏အင်တာနက်ဝက်ဆိုဒ်တွင် လေ့လာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
လိုပါသည်။ လက်မှတ်မပါရှိပဲ မည်သည့်ပွဲစဉ်ကိုမျှ ၀င်ခွင့်ပြုလိမ့် မည်မဟုတ်ပါ။ (နာမည်ချိတ်ဆွဲရန်)
ပွဲခန်းမကိုရောက်ရှိရန် သွားလာရေးအတွက် ရွေးချယ်မှုများက ဘာလဲ။
သွားလာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ အချက်အလက်များကို ဤနေရာ တွင်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
မနှစ်ကပြုလုပ်ခဲ့သည့် Global Convention မှ စိတ်ဝင်စားဖွယ်များကို ကြည့်ပါ။